Soo dejisan AVG 5.2.0.1 – Android – Vessoft
Soo dejisan AVG
License: Bilaash, freeware
Avg – software antivirus ah si ay u ilaaliyaan qalab aad ka dhanka ah codsiyada waxyeello iyo fayrusyada. Avg ee uu baaritaanku faylasha, codsiyada iyo goobaha kala duwan ee qalabka u-yadaas oo bixiya in ay ka saarto xogta cudurka dhamaadka kormeerka. Software wuxuu kuu ogol yahay in meel fog laga maamuli qalabka iyo si loo ogaado meesha uu qalabka lumay haddii ay dhacdo ka mid ah xatooyada. Avg bixisaa dhirta ee nabad iyo ammaan ah ee bogagga internetka ee internet-ka. Software ayaa awood u si ay ula socdaan batari ama xasuusta khayraadka qalabka iyo saaro geedi socodka ee kala duwan ee hoos nidaamka. Avg sidoo kale taageertaa Mudanayaasha ee scanner inay tijaabiso qalabka waqti ah aasaasay ama ay codsi user a.
Nidaamka awood leh ilaalinta
Updates joogtada ah ee database-virus ah
Jeegga faahfaahsan ee goobaha iyo content qalabka
In la helo qalab lumay
Performance iyo indiscriminateness khayraadka nidaamka
AVG Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Avast 5.0.18
العربية, English, Українська, Français... CM Security 2.10.1.1052
العربية, English, Русский, Bahasa Indonesia... APUS Launcher 2.2
Desktop Ayna System Hab fudud oo degdeg badan in ay tayadoodii desktop-ka. Software wuxuu bixiyaa shaqo oo ugu badnaan degdeg ah oo qalab ah oo ka kooban a codsiyada waxtar leh.
العربية, English, Français, Español... Vine 3.3.08
العربية, English, Українська, Français... Ask.fm 3.2
Network Bulshada Software si loo maareeyo adeegga caanka ah ee su'aalaha iyo jawaabaha. Software macaamila shabakadaha kale ee bulshada loo jecel yahay.
العربية, English, Українська, Français... Documents To Go 4.002.1516
Akhristayaasha E-buugga Software ayaa si aad u eegto oo ku soo bixi eBooks ee dukaanka ugu weyn. Codsiga waxaa ku jira goobaha kala duwan si loo hubiyo in reading ugu raaxo.
العربية, English, Українська, Français... Microsoft Word 16.0.6131.1008
Office Mid ka mid ah software ugu caansan in la abuuro iyo waraaqaha edit. Software wuxuu taageeraa hawlaha badan oo kala duwan oo uu leeyahay nidaam ku haboon maamulka loogu talo galay aaladaha Android.
العربية, English, Українська, Français... Busuu 6.11.3.52
Waxbarashada Habka ugu xiiso leh si ay u bartaan ama loo horumariyo aqoonta afafka qalaad. Software wuxuu isticmaalaa qalab kala duwan oo waxbarasho ah horumarinta afka ka soo bilow iyo heer sare.